हेर्न लायक पाेकली झरना ! - Nagarik Medi
हेर्न लायक पाेकली झरना !
ओखलढुंगा- पोकली झरनामा रमाउन आउने पर्यटकको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण झरना अवलोकनमा आउने बाह्य पर्यटक घटे पनि आन्तरिक आगन्तुक बढिरहेका छन् । अहिले पाेकली उर्लिएकाे छ । धेरै टाढाबाटै अबलाेकन गर्न पनि सकिन्छ ।
करिब ४ सय ३० फिट अग्लो पोकली झरना देशकै अग्ला झरनामा पर्ने पर्यटकीय महत्व भएको प्राकृतिक सम्पदा हो । दुर्लभ जडीबुटीले भरिएको पर्वतको धुरीमा पर्ने गौरीवनबाट बगिआउने खोला लिखु गाउँपालिकाको पहराबाट खस्दा पोकली झरनाको आकर्षक दृश्य बनेको छ ।
देशका सय गन्तव्यमा पर्ने पोकली झरनाको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि गठित पोकली झरना सेवा समाजले बेला बेलामा अवलोकन भ्रमण, सांस्कृतिक मेला तथा महोत्सव गर्दै आएको छ । झरनासम्म पुग्नका लागि सडकको सहज पहुँच र पर्यटन विकासको पूर्वाधार विकास गर्न सकिएमा पोकली झरना ओखलढुंगाको मात्र नभइ मुलुककै महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्ने देखिन्छ । जनता समाचारबाट